Si lagu daboolo.
waxaa maamula 20-05-09
Waxyaabaha loo yaqaan 'Tarpaulins' waxaa loo isticmaalaa qaabab badan si ay uga ilaaliyaan dadka iyo waxyaabaha dabaysha, roobka, iyo iftiinka qoraxda. Waxaa loo istcimaalaa inta lagu gudajiro dhisme ama masiibada ka dib si ay u ilaaliyaan qeyb ahaan dhismayaasha ama dhismayaasha burburay, si looga hortago wasakhda inta lagu jiro ranjiyeynta iyo howlaha la midka ah, iyo in la soo qaado lana uruuriyo qashinka. Waxay yihiin ...
Sidaan u Hirgelinno Duub Guriga Ka Wanaagsan
Guriga lagu duubo, oo sidoo kale loo yaqaan astaamaha sumcadda guryaha lagu sumeeyay, guud ahaan waxaa loola jeedaa alaab isku-darka ah oo loo isticmaalo in lagu ilaaliyo dhismayaasha. Gurigu wuxuu u shaqeeyaa sidii carqalad u adkaysta cimilada, kana horjoogsada roobka inuu galo darbiga halka u oggolaanaya uumiga biyuhu inuu u gudbo bannaanka. Haddii qoyan yahay ...
Tiknoolajiyadda Hormarsan ayaa ka dhigaysa xididdooyin aamin ah.
Dhismuhu waa qayb inta badan aan weli muuqan laakiin weli muhiim u ah nidaamyada guryaha saqafka maanta ah. Waa lakabka walxaha biyuhu ka ilaalinayaan ee ka ilaaliya saqafka dushiisa ama ku beddelanaya fara-gelinta biyaha, haddii ay dhacdo in lakabka kore uu dhaawac gaaro. Cajiinka saqafka leh ee darjiifka ah ayaa laga doorbidayaa ...